Agrochemicals, Agence despersant, Acid Crotonic - Freemen
19 taona dia mifantoka amin'ny loko volom-borona sy ny fametahana hazo.
Shanghai Freemen Chemicals Co, .Ltd dia mikendry ny ho iray amin'ireo mpamatsy simika eran-tany amin'ny alàlan'ny famoronana sanda fanampiny. Izahay dia manolo-tena hanome vokatra maharitra simika maharitra sy mifaninana amin'ny mpanjifa manerantany sy ny faritra amin'ny alalàn'ny fampidirana loharanon-karena.
Ny indostrian'ny serivisy
Manolotra portfolio isan-karazany izahay hanompoana ireo mpaninjara eo an-toerana izay manana traikefa mihoatra ny 25 taona amin'ny indostrian'ny agrochemical. Ny tolotra ataonay dia miainga amin'ireo mpanelanelana mandroso mankany amin'ireo mpikatroka miasa (insectisides, Fungicides ary Herbicides) ary formulation. Miahy ny quliaty amin'ny vokatra izahay, tsy voafetra ho fanampiana sy solvents, afaka manome haben'ny fonosana isan-karazany izahay mba hamaly ny fangatahan'ny mpanjifa.
Manome ireo mpanelanelana sy API mandroso voafantina izahay miaraka amin'ny fahalalànay momba ny teknika sy ny fomba fanamboarana GMP. Manaraka akaiky ny fepetra takiana amin'ny solvents sy ny fanaraha-maso ny fahalotoana izahay, hahazoana antoka fa azo antoka ny fampiasana ny vokatra.
Ny vokatra avo lenta voafantina dia ampiasaina amin'ny fampiharana marobe: manomboka amin'ny indostrian'ny fiara sy ny kodiarana ka hatrany amin'ny indostrian'ny herinaratra, fananganana ary solika sy gazy.
Vonona izahay hamolavola sy hanamboatra tolotra matihanina sasany manomboka amin'ny kilaometatra amin'ny laboratoara ka hatramin'ny famokarana varotra hatrany ary amin'ny fotoana maharitra. Ny vokatra avoakanay dia manana tombony miavaka amin'ny alàlan'ny fanamafisana ny fizotrany na ny akora manokana. Manohy manatsara ny vidiny sy ny fenitra HSE isan'andro izahay.